I-albhamu yase-studio kaLauryn Hill iqopha umlando omusha | Scrolla Izindaba
I-albhamu yase-studio kaLauryn Hill iqopha umlando omusha
ULauryn Hill wase-New Jersey usephule elinye futhi irekhodi, nge-albhamu yakhe eyodwa yase-studio, i-Miseducation kaLauryn Hill, esezuze izinga ledayimani eminyakeni engama-22 ngemuva kokukhishwa kwayo.
Umculi ocula i-Neo-Soul usephule amarekhodi phambilini nge-classic enamathrekhi ayi-16. Kusukela engomeni yakhe yokuqala, “i-Doo-Wop”, kuye “ku-Everything is Everything”, konke kule phrojekthi kwakha izingcezu ze-rap-classic.
Iviki elilodwa ikhishwe ngoMandulo ngowezi-1998, i-albhamu, eyangena kwinombolo yokuqala ku-Billboard 100, isadayise amakhophi ayizi-400,000.
Ngaleso sikhathi, lokhu bekungukuthengiswa kakhulu kweviki lokuqala ngomculi wesifazane emlandweni.
I-albhamu yaqhubeka nokuthola ukuphakanyiswa okuyishumi kwi-Grammy, yanqoba izindondo ezinhlanu, kwi-41st Annual Grammy Award, futhi ngokwenza njalo uLauryn Hill waba ngowesifazane wokuqala ukuthola iziphakamiso nemiklomelo eminingi ngobusuku obubodwa.
Futhi manje i-albhamu, esidayise amakhophi alinganiselwa ezigidini ezingama-20 emhlabeni wonke, inikezwe isikhundla seDayimane yi-Recording Industry Association of America, ngokuthengisa amakhophi alinganiselwa ezigidini eziyishumi eMelika.
“Siyakwamukela ku-RIAA Diamond Club @MsLaurynHill! I-#TheMiseducationofLaurynHill manje sekuyi-albhamu eqinisekiswe kashumi!” Kubhale Abakwa-RIAA kuTwitter ngesonto eledlule.
Umthombo wezithombe: @sleepongems